Ubudlelwano phakathi kobuhlakani obuketshezi nemisebenzi ephezulu | Ukuqeqeshwa kwengqondo
Sesivele sikhulume ezimweni eziningana ze- intelligence futhi of imisebenzi ephezulu, kuze kuchazwe nocwaningo olwaluzoveza umehluko othile obalulekile.
Ngesikhathi esifanayo, noma kunjalo, akunakugwemeka ukuphawula ukugqagqana okuthile phakathi kwezincazelo zokwakhiwa kwezinkolelo-mbono ezimbili; isibonelo, amakhono wokuhlela nokuxazulula izinkinga asetshenziswa ngokuhlelekile emiqondweni eyehlukene kanye nezincazelo zemisebenzi ephezulu. Kodwa-ke, lawa makhono amabili avame ukuba nomthelela ekuchazeni isimilo esichaza ngokuthi "sihlakaniphile".
Ngokunaka lokhu kufana phakathi kwemisebenzi yezobunhloli nemisebenzi yezokuphatha, kunengqondo ukulindela ukuthi owokuqala okungenani abikezelwe ngulowo owedlule. Ngamanye amagama, kufanele silindele ukuthi njengoba ukusebenza ezivivinyweni zokukala imisebenzi ephezulu kukhula, kukhona ukwanda kwezikolo ezivivinyweni zokuhlola ubuhlakani.
Mayelana nokuhlolwa kwemisebenzi yokuphatha, ababhali abaningana baveza ukuthi izivivinyo ezizihlola ngemisebenzi ebonakalayo iyinkimbinkimbi (ngokwesibonelo, Ukuhlolwa Kokuhlolwa Kwekhadi leWisccin noma i Umbhoshongo waseHanoi), Azikho ukwethembeka nokusebenza. Eminye yemizamo eyaziwa kakhulu yokuzama ukunqanda le nkinga ngekaMiyake nabasebenzisanayo abaye bazama ukwehlukanisa imisebenzi yokuphatha ibe yizinto ezilula futhi, ngokunembile, ezintathu:
ukubuyekeza kwe inkumbulo yokusebenza;
Ngocwaningo oludume kakhulu olwenziwe kubantu abadala abasezingeni leyunivesithi, abacwaningi abafanayo bagqamise ukuthi lawa makhono amathathu axhumene kanjani kodwa futhi kubonakala sengathi ayahlukaniswa, futhi kukhombisa nokuthi bazokwazi ukubikezela ukusebenza kwemisebenzi eyinkimbinkimbi (ngokwesibonelo, Umbhoshongo waseHanoi futhi i Ukuhlolwa Kokuhlolwa Kwekhadi leWisccin).
UDu nozakwabo ngo-2010 banquma ukuhlola imodeli yaseMiyake futhi eminyakeni yobudala bokukhula futhi, ngokunembile, kubantu abaneminyaka ephakathi kuka-11 no-12. Inhloso bekuwukubheka ukuthi ngabe ukuhlelwa kwemisebenzi yezokuphatha kuyafana yini nokutholakala kubantu abadala, okungukuthi, kunezinto ezintathu (ukuvimbela, ukuvuselelwa kwememori yokusebenza kanye nokuguquguquka) ezihlobene komunye nomunye kepha ngokusobala ziyahlukaniswa.
Inhloso eyengeziwe bekuwukuthi linganisa ukuthi ubuhlakani obuketshezi buchazwe kanjani yimisebenzi ephezulu.
Ukuze benze lokhu, ababhali abacwaningayo babeke abantu abangama-61 ekuhlolweni kobuhlakani ngokusebenzisa Am matrices athuthukayo weRaven, kanye nokuhlolwa kwemisebenzi yokuqonda ezintweni ezintathu esezishiwo.
Mayelana nenhloso yokuqala, imiphumela iqinisekise ngqo okulindelwe: izingxenye ezintathu ezilinganisiwe zemisebenzi yokuphatha bezihambisana kepha zisahlukaniswa, ngaleyo ndlela iphindaphinda, kubantu abasebasha kakhulu, imiphumela eyashicilelwa eminyakeni eyi-10 ngaphambili nguMiyake nabahlanganyeli.
Kodwa-ke, mhlawumbe okuthakazelisa nakakhulu yilezo eziphathelene nombuzo wesibili: yiziphi izingxenye zemisebenzi ephezulu ezichaze izikolo eziphathelene nokuhlakanipha oketshezi kakhulu?
Cishe zonke izivivinyo zemisebenzi ephezulu zikhombise ukuhlangana okuphawulekayo (babevame ukuhambisana) ngezikolo ekuhlolweni kobuhlakani. Kodwa-ke, "ngokulungisa" amanani wezinga lokuhlangana okuphakathi kokuvimbela, ukuguquguquka kanye nokuvuselelwa kwememori yokusebenza, owokugcina kuphela owahlala ehlotshaniswa kakhulu nobuhlakani obuketshezi (kuchazwa cishe ngama-35%).
Noma kuvame ukuhlotshaniswa ngokwezibalo, imisebenzi yezobunhloli neyezokuphatha iyaqhubeka nokuvela njengezakhi ezimbili ezihlukile zethiyori (noma, okungenani, izivivinyo ezisetshenziselwa ukuhlola ukwakhiwa okukodwa noma okunye kubonakala sengathi zikala amandla ahlukile). Noma kunjalo, ukuvuselelwa kwememori yokusebenza kubonakala kuyingxenye yemisebenzi yokuphatha ehlobene kakhulu nobuhlakani. Kodwa-ke, ngaphambi kokuzikhohlisa ukuthi lo mbuzo ulula kakhulu (mhlawumbe kucatshangwa ukuthi inkumbulo yokusebenza ephansi ifana nokuhlakanipha okuphansi futhi okuphambene nalokho), kufanelekile ukucabanga ukuthi kumasampuli ngaphandle kwalawo "ajwayelekile", izinto ziba nzima kakhulu. Isibonelo, ezinkingeni ezithile zokufunda, izikolo zememori yokusebenza azibonakali zihlobene kakhulu ne-IQ. Ngakho-ke kubalulekile ukubheka imininingwane evela kulolu cwaningo njengokudla okubalulekile komcabango, ngenkathi uhlala uqaphe kakhulu kunokugijimela eziphethweni.
Izingane ezinesipho: hlukanisa phakathi kobuhlakani nemisebenzi yokuphatha
Ithonya le-IQ ekusebenzeni kwezifundo: kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwesikole
Ngabe izinga lemfundo linomthelela ezingeni lezemfundo?
Ukuphazamiseka kwengqondo okuphezulu okungahle kube khona kanye nokufunda okuthile
Ubuhlakani, ukunakwa kanye nokusebenza kwezifundo: yini ebaluleke ngempela?
Ubudlelwano phakathi kokuqamba, ubuhlakani kanye nemisebenzi ephezulu
Umculo, ubuhlakani kanye nemisebenzi ephezulu
Khulisa Inkumbulo Yokusebenza Ukukhulisa Ubuhlakani: Ingabe Kuyasebenza Ngempela?
Ingabe ukufunda umculo kukwenza ube nobuchule?
UDuan, X., Wei, S., Wang, G., & Shi, J. (2010). Ubudlelwano phakathi kwemisebenzi yokuphatha nobuhlakani ezinganeni ezineminyaka engu-11 kuya kwengu-12 ubudala. Ukuhlolwa Kokuhlolwa Nokuhlolwa Kwezemizwa, 52(4), i-419.
UGiofrè, D., noCornoldi, C. (2015). Ukwakheka kobuhlakani ezinganeni ezinokukhubazeka okuthile ekufundeni kwehlukile uma kuqhathaniswa nezingane ezijwayele ukukhula. Intelligence, 52, I-36-43.
UMiyake, A., Friedman, NP, Emerson, MJ, Witzki, AH, Howerter, A., & Wager, TD (2000). Ubumbano nokwehluka kwemisebenzi yeziphathimandla kanye neminikelo yabo emisebenzini eyinkimbinkimbi “ye-lobe engaphambili”: Ukuhlaziywa okuguquguqukayo okufihlekile. Psychitive psychology, 41(1), i-49-100.
imisebenzi ephezulu, intelligence, imisebenzi yezobunhloli neyokuphatha, inkumbulo yokusebenza, inkumbulo yokusebenza nobuhlakani, inkumbulo esebenzayo ne-IQ, qi
Ubudlelwano phakathi kobuhlakani obuketshezi nemisebenzi ephezulu2021-08-222021-08-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/la-relazione-tra-intelligenza-e-funzioni-esecutive.jpg200px200px
Imisebenzi yokulawula "yoHlelo": umphumela wokufaka amakhodi ekuhleleni nasekuvimbeleni iminyaka yobudala besikoleImisebenzi yezokuphatha, imisebenzi yezokuphatha, i-Neuropsychology, engahluziwe
Imisebenzi ebandayo neshisayo: babikezelani ngokuhlukile komunye nomunye?Izindatshana, Imisebenzi Yesigungu Esiphezulu, Imisebenzi Yesigungu Esiphezulu, Imemori Yokusebenza